लेनिन : श्रमिक मानवजातिको मुक्ति–सङ्घर्षको गौरवशाली नाम - चौतारी पोष्ट अनलाइन
लेनिन : श्रमिक मानवजातिको मुक्ति–सङ्घर्षको गौरवशाली नाम
‘एउटा यस्तो भेटघाट भयो जुन हजार वर्षमा एकपटक मात्र हुन सक्छ – महानतम् बौद्धिक शक्ति र त्यस्ता जनताको बीचमा भएको भेट जसको भावना सो बौद्धिक शक्तिमा मूर्तमान भएको थियो । जनताका आशााहरू, जनताको तागत र रुसका सारा अन्तर्निहित शक्तिहरू सो बौद्धिक शक्तिमा मूर्तमान हुँदै अन्त्यमा गएर ती दुई एक भए । एउटा राष्ट्रको प्रतिभासित एकजना व्यक्तिकोप्रतिभाको यस जैविक ९यचनबलष्अ० मिलनले केही कुराको उपस्थितिको अपेक्षा गर्छ – महान् प्रेम, असीम आस्था, असीमित मनस्विता ९ःबनलबचष्mष्तथ०, आत्मबलिदान र आत्मत्यागको महामानवीय क्षमता । कस्तो महान् प्रेम ? आफूलाई हुर्काएका जनताप्रतिको प्रेम । कस्तो आस्था ? सो जनताको तागतमा आस्था । लेनिनमा ती सबै कुरा थिए । उनको आलोचनात्मक मानसिक शक्तिले– एक शुद्ध तीक्ष्ण हीराले– उक्त गुणहरूलाई कुनै पनि किसिमको साधारणीकरणबाट सुरक्षित राख्यो । उनको अदम्य भौतिक तथा बौद्धिक तागत उनको मनको विशाल तथा ज्यादै बहुपक्षीय तागतको अधीनस्थ रहेको थियो । (ऐ. ऐ. पृष्ठ २६१)
कृष्णदास श्रेष्ठको ‘लेनिनका विलक्षण चारित्रिक गुणहरू : लेनिन कस्ता थिए ? पुस्तिकाको अंश ।moolbato.com/from
Prevभारतमा एकैदिन ३ लाख १५ हजारमा संक्रमण महाराष्ट्रमा लकडाउन
Nextकोरोनाकाल : डिजिटल बैंकिङबाट खर्बौं भुक्तानी